• Display 100+ years English and ...Read more >
• Display 100+ years English and Myanmar calendar (from 1910 to 2020)• Find your birthday in English or Myanmar by Myanmar date or English date• Save your family and friends' birthday together with calendar• Write down some notes for your memory• Work without installing Myanmar font nor Internet• Customize app background & adjust font size to suit your eye• Find out the details of Myanmar Calendar: Pyat-tha-dar? Yat-yar-zar? Opote? • View Myanmar Public Holidays & many social events about Myanmar• Myanmar Calendar Widget on home screen
​မင်္ဂ​လာ​ပါ ​ရွှေ​မြန်​မာ။ ​ဒီ​ပြ​က္ခ​ဒိန်​ကို ​ကြိုက်​မယ်​လို့ ​ယုံ​ကြည်​ပါ​တယ်။ ​မြန်​မာ​တို့​အ​တွက် ​အ​ကျော်​ကြား​ဆုံး​နှင့် ​အ​သုံး​ဝင်​ဆုံး ​နှစ်​တစ်​ရာ ​ပြ​က္ခ​ဒိန်​ပါ။ ​ဘာ​တွေ​ပါ​လဲ​ဆို​ရင် -• ၁၉၁၀-၂၀၂၀ ​ထိ ​အင်္ဂ​လိပ် ​မြန်​မာ​ရက်​တွေ ​ပါ​တယ်။• ​မြန်​မာ​စာ ​သွင်း​မ​ထား​သည်​ဖြစ်​စေ၊ ​အင်​တာ​နက်​မ​ရှိ​သည်​ဖြစ်​စေ ​သုံး​လို့​ရ​တယ်။• ​မြန်​မာ​ရက်​နဲ့ ​ရှာ​ရှာ၊ ​အင်္ဂ​လိပ်​ရက်​နဲ့ ​ရှာ​ရှာ ​ရှာ​လို့​ရ​တယ်။• ​နောက်​ခံ​ပုံ​ကို ​ကိုယ်​ကြိုက်​တဲ့ ​ပုံ​ပြောင်း​လို့ ​ရ​သ​လို၊ ​စာ​လုံး​အ​ကြီး ​အ​သေး​လည်း ​ကိုယ်​ကြိုက်​သ​လို ​ထား​လို့ ​ရ​တယ်။• ​အ​သေး​စိတ်​ကို​လည်း ​ကြည့်​လို့​ရ​တယ်။ ​ဥ​ပ​မာ - ​ပြ​ဿ​ဒါး၊ ​ရက်​ရာ​ဇာ ​လား။ ​ဥ​ပုသ်​ရက်​လား။• ​မိ​သား​စု ​သူ​ငယ်​ချင်း ​မွေး​ရက်​တွေ ​မှတ်​ထား​လို့​လည်း ​အ​ဆင်​ပြေ​တယ်။• ​ဒိုင်​ယာ​ရီ​ပဲ ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ကိုယ်​မေ့​မ​သွား​အောင် ​မှတ်​ထား​ချင်​တာ​လေး​တွေ ​ရှိ​လည်း ​ရေး​ထား​လိုက်။• ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​ရုံး​ပိတ်​ရက်​တွေ ​အ​ပါ​အ​ဝင်၊ ​မြန်​မာ ​ပွဲ​လမ်း​သ​ဘင်​ရက်​တွေ​လည်း ​ကြည့်​လို့​ရ​တယ်။• Home Screen ​ပေါ်​မှာ Widget ​ရှိ​တော့ ​အ​ရမ်း ​အ​ဆင်​ပြေ​တာ​ပေါ့။
If you like it, please pay us. Just kidding. Share in Facebook, Twitter or just tell your friends to use.​ကြိုက်​တယ်​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို့​ကို ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​ပါ။ ​နောက်​တာ​ပါ။ Facebook, Twitter ​ထဲ Share ​ပေး​ပါ။ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ်​လည်း ​တ​ခြား​သူ​များ ​သုံး​ဖို့ ​ပြော​ပြ​ပေး​ရင် ​ကျေ​နပ်​ပါ​ပီ။ၾကိဳက္တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ပိုက္ဆံေပးပါ။ ေနာက္တာပါ။ Facebook, Twitter ထဲ Share ေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း တျခားသူမ်ား သုံးဖို႕ ေျပာျပေပးရင္ ေက်နပ္ပါပီ။
Choose Download Locations for Myanmar Calendar+Note+Birthday v1.2.1	Note: If the download link doesn't work, please Report Link Problem	Download APK From Ul
Myanmar, Calendar	Share Myanmar Calendar+Note+Birthday At Social Media